Tanàna iray manontolo mihitsy ity levon’ny afo ity, ny alarobia alina lasa teo, hoy ny fanazavana voaray. May avokoa ny fitaovan’ny mpianatra hiatrehana ny fanadinana bakalorea, toy izany koa ny entana sy ny biby fiompy rehetra ary ny tahirim-bokatra samihafa. Tsy mbola fantatra ny niavian’ny afo, hoy ny fanazavana fa niainga tamina tokantrano iray. Niitatra iny ary izao niteraka famaizana tokantrano an-jatony izao. Tsy nisy ny naratra sy ny aina nafoy fa ny famaizan’ny tanàna no tsy hita pesimpesenina. Nidina tany an-toerana ny tompon’andraikitra, nahitana ny ben’ny tanàna, ny lehiben’ny distrika, nitondra fanampiana ho an’ireo olona an’arivony izay traboina. Mangataka amin’ireo izay malala-tanana koa izy ireo, mba hanao vonjy rano vaky sy vonjy aina ho an’ireto olona tsy manan-kialofana ireto. Nanokatra ny fanadihadiana mikasika ity hain-trano goavana ity ny mpitandro ny filaminana, nahitana polisy, zandary ary ny tafika.